SAWIRRO: Shir loogu hadlaayay Xaquuqda Maqaamka G/Banaadir oo Xalay ka dhacay Switzerland?
Sunday February 11, 2018 - 22:45:42 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Shir loogu hadlaayay Xaquuqda Maqaamka Gobalka banaadir ayaa Xalay ka dhacay caasimadda dalka Switzerland Bern.
Shirkaasi ayaa waxaaa ka soo qeyb galay qeybaha kala duwan Ee Bulshadda oo ka kala yimid wadamada Yurub iyo Ameerika, Canada,waxaana si wayn uga dhex muuqday warbaahinta ku bohowday Koonfurta Soomaaliya afka qalaad loo yaqaan Southern Media Co-Operation ee uu hogaaminayay madaxa guud Dr Amaandhoorey.
Shirkaasi ayaa diirada lagu saaray xaquuqda Maqaamka ka maqan Gobalka Banaadir iyadoo sidoo kale lagu soo dhoweeyay maamulka cusub ee Gobalka Banaadir oo loogu baaqay in dadka degan Gobalka Banaadir xaquuqdooda si siman oo cadaalada wax loogu qeybiyo.
Xafladaan oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa aay ku soo dhamaatay jawi farxad leh iyo hab maamus dadkii ka soo qeyb galay wada jecleysteen
By Ustad Adam Increase Halkaan Hoose ka Daawo Sawirada iyo Muuqalada